တစ်ခေတ်တစ်ချိန်က လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီ မင်းသမီးကြီး ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်ရဲ့ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ – Nyi Ma Lay
တစ်ခေတ်တစ်ချိန်က လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီ မင်းသမီးကြီး ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်ရဲ့ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ
By Ko AyePosted on March 23, 2022 March 23, 2022
မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် လောကမှာ အကယ်ဒမီ ငါးဆုရှင် ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင် ဆိုရင်တော့ မသိသူ မရှိ သလောက် ပါပဲနော် .. သူမ က တော့ အနုပညာ မျိုးဆက် ဖြစ် တဲ့ အဆိုတော်မေဆွိ ကိုလည်း ချန်ထား ရစ်ခဲ့ပြီး အဆိုတော် မေဆွိ က လည်း ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေး မှုကို ရရှိ ထားသူ ဖြစ်ပါတယ် နော် . . မင်းသမီး ကြီး ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင် က တော့ အနုပညာ အလုပ် တွေကို ဆက်လက် မလုပ်ကိုင် တော့ဘဲ အနားယူ နေတာကြာ ပြီဖြစ်ပါ တယ်နော် ။
ဒီနေ့ လေးမှာ တော့ ဝါရင့် သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ မင်းသမီးကြီး ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင် ဆေးရုံ တက်ရောက်ကာ ဆေး ကုသမှု ခံယူနေရ ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်ဆေးရုံတက်သဖြင့် ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး နာယကကြီး များ မှ သွားရောက် သတင်းမေ းအားပေးစကားပြောခဲ့ ကြ သည် ။
အကယ်ဒမီ ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင် က တော့ လူကြီးရောဂါ ကြောင့် နေထိုင် မကောင်းဖြစ်နေပြီး လောလော ဆယ်တော့ စကားပြော လိုက်တိုင်း မောပန်း နေတယ်လို့ လည်း သိရပါ တယ်နော်…. ပရိသတ်ကြီး လည်း အကယ်ဒမီ မင်းသမီးကြီး ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင် အတွက် ဆုတောင်း စကား​လေး ရေးပေး ခဲ့ကြပါ အုံးနော် ။
Credit : Cele Info
ျမန္မာ့ ႐ုပ္ရွင္ ေလာကမွာ အကယ္ဒမီ ငါးဆုရွင္ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ ဆိုရင္ေတာ့ မသိသူ မရွိ သေလာက္ ပါပဲေနာ္ .. သူမ က ေတာ့ အႏုပညာ မ်ိဳးဆက္ ျဖစ္တဲ့ အဆိုေတာ္ေမဆြိ ကိုလည္း ခ်န္ထား ရစ္ခဲ့ၿပီး အဆိုေတာ္ ေမဆြိ က လည္း ပရိသတ္ ေတြရဲ့ ခ်စ္ခင္ အားေပး မႈကို ရရွိ ထားသူ ျဖစ္ပါတယ္ ေနာ္ . . မင္းသမီး ႀကီး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ က ေတာ့ အႏုပညာ အလုပ္ ေတြကို ဆက္လက္ မလုပ္ကိုင္ ေတာ့ဘဲ အနားယူ ေနတာၾကာ ၿပီျဖစ္ပါ တယ္ေနာ္ ။
ဒီေန႔ ေလးမွာ ေတာ့ ဝါရင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ အကယ္ဒမီ မင္းသမီးႀကီး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ ေဆး႐ုံ တက္ေရာက္ကာ ေဆး ကုသမႈ ခံယူေနရ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဆး႐ုံတက္သျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ုံး နာယကႀကီး မ်ား မွ သြားေရာက္ သတင္းေမ းအားေပးစကားေျပာခဲ့ ၾက သည္ ။
အကယ္ဒမီ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ က ေတာ့ လူႀကီးေရာဂါ ေၾကာင့္ ေနထိုင္ မေကာင္းျဖစ္ေနၿပီး ေလာေလာ ဆယ္ေတာ့ စကားေျပာ လိုက္တိုင္း ေမာပန္း ေနတယ္လို႔ လည္း သိရပါ တယ္ေနာ္…. ပရိသတ္ႀကီး လည္း အကယ္ဒမီ မင္းသမီးႀကီး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ အတြက္ ဆုေတာင္း စကား​ေလး ေရးေပး ခဲ့ၾကပါ အုံးေနာ္ ။
Previous post ထူးဆန်းတဲ့ ဝက်ကြီးတစ်ကောင် သူ့ရဲ့ကားပေါ်မှာ ပါလာကြောင်း ဗီဒီယိုရိုက်ပြီး ပရိတ်သတ်ကြီးကို ပြသလိုက်တဲ့ မေထွဋ်ခေါင်ရဲ့ ခင်ပွန်း
Next post ဆေးရုံတက်ပြီး ခွဲစိတ်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်လိုက်ရကြောင်း ပရိတ်သတ်ကြီးကို ပုံနဲ့တကွ ပြသလာခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် နေရဲ
သဲသောင်ပြင်မှာ အားရပါးရဆော့ကစားနေရှာတဲ့ သမီးလေး Ivyလေးရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံလေးတွေမျှဝေလာခဲ့တဲ့ အေသင်ချိုဆွေ
ကချင်ပြည်နယ်က စိမ်းစိုနေတဲ့ရှုခင်းလှလှလေးတွေကို နောက်ခံထားကာမြင်သူတိုင်းငေးမောလောက်စေမဲ့ ဝတ်စုံလေးနဲ့ အမှတ်တရရိုက်ကူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကိုပြသလာတဲ့ရေဗက္ကာဝင်း
သူ့ကို ဂီတာတီးခိုင်းပြီး ချယ်ရီသင်းရဲ့သီချင်းလေးကို မပီကလာပီကလာနဲ့ အားရပါးရဆိုနေတဲ့ မြေးလေးကိုကြည့်ပြီး သဘောတွေကျနေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမျှဝေလာတဲ့ လွင်မိုး
ဝရမ်းပြေးရင်း လွတ်မြောက်ရေးနယ်မြေကို ဘယ်‌လိုရောက်ရှိလာလဲဆိုတာကို ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် သီဟထွန်း
သူထက်ကြီးတဲ့ ရေပုံးကြီးကို ကိုင်ပြီး အပင်လေးတွေကို ကိုယ်တိုင်ရေလောင်းပေးဖို့ကြိုးစားနေရှာတဲ့ Pilar လေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်